३० करोडको आईपीओ निष्कासन गर्दै जनरल इन्स्योरेन्स
काठमाडौं (अस) । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारणसभा बुधवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष कुनाल कयालको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले रू. ३० करोड बराबरको सर्वसाधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कम्पनीको जारी चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब छ । कम्पनीले सोही पूँजीको ३० प्रतिशत बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका हो । कम्पनीको संस्थागततर्फ ७० करोड रुपैयाँको शेयर छ ।
कम्पनीले आव २०७४/७५ मा १९३ बीमालेख जारी गरी रू. ३१ लाख ६९ हजार बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । २०७५ असारदेखि सञ्चालनमा आएको कम्पनीले उक्त आवमा २४ दिन मात्र कारोबार गरेको थियो । साथै, कम्पनीले गत आवमा २०७५/७६ मा ३१ हजार २१७ बीमालेख जारी गरेको छ ।
कम्पनीमा गत आवमा ७३८ ओटा बीमा दाबी परेको थियो । त्यसमध्ये कम्पनीले ५०८ ओटा दाबीबापत रू.४३ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, साधारणसभाले कुनाल कयाल, लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्ण बोहरा र दीपेन्द्र अग्रवाललाई सञ्चालक समितिमा निर्वाचित गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म ३८ शाखा र १० उपशाखा कार्यालयमार्फत बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।